Qorxadii Dhacdaba Teenu Way Kala Qaxaysaa. Khasaaraha Noocana Sidee Looga Hortagaa – somalilandtoday.com
Qorxadii Dhacdaba Teenu Way Kala Qaxaysaa. Khasaaraha Noocana Sidee Looga Hortagaa
Nin philosopher ah oo Denish ah ( Dr. Soren Kierkegaard) Wuxuu yidhi ” Haddaad Doonaysid inaad Horuumar Samaysid waa inaad ADOO DIB U JEEDA HOORUU DHAQAAQDAA . Wuxuu u jeedaa waa inay kuu muuqanayaan wixii aad soo martay OO dhami Isla markaana aad horuu socinaysid, Wuxuu uga jeedaa waa inaad Ka dhereg santay taariikhdaad soo martay si aan dhibaatadeedii iyo faaiidadeeddiiba aanad u hilmaamin waa inaad Ka dhereg santay ,mustaqbalka soo socdaana waxaa laga dersaa oo laga bartaa waxa soo socdaana waa wixii KU soo maray.
Hadaba Haddaad hoos ugu dhaadhaco dulucda maqaalkaygan reer Somaliland waxaa soo maray Shan QAX oo
mid walba waqtigiisii dhib badnaa shantaana dad Fara KU tiris ah ayaa Ka nool goob jooga yaashii DADKA badankiisu afar ama seddex bay goob joogayaal ahaayeen. Xaaji Cabdi Waraabe oo kale shantaba qaxoontigii buu Ka mid ahaa.
1- Qaxii ugu horeeyey waa dagaal Xaakimo ama Xukuumadi keento waxaa ugu horeeyey reer Somaliland waa Qaxii 1940gii waa dagaalkii labaad ee adduunka (proxy War) buu ahaa oo Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa ayaa Somaliland isku dhex dilay intuu Talyaanigu Somalia Ka soo duulay. Waa dagaalkii la baxay BAANDADA . Ingiriisku Wuxuu Somaliland Ka Xukumi Jiray Berbera berigaa, waa Dagaalka geesigii Cumar KU joog ciidanka yar la galay buurta yar ee saaran Tuulada Dacar-budhuq ee uu muddo KU hakiyey ciidankii Talyaaniga resistance wacanna sameeyey rag kalaa Kula dhintay oo qaar magacyadoodii labgaranayo isagu hogaamiye ayuu u ahaa. waa Dagaalka dhawaaca sahlani Ka soo Mohamoud Axmed Cali ( Father of Education of Somali oo dhan) isagoo KU xigeen u ahaa Sarkaal ciidanka Ingiriiska watay Berbera, waa dagaalka Ingiriiskii Hindidii iyo Somalidii raacday ay Cadan u qaxeen Somalidii Berbera joogtay oo dhami miyi u qaxeen oon Berbera qof KU hadhin. Berigaa gaadiid ma jirin lug iyo awr baa socodku ahaa ,dhibta waad garan kartaa markaad bill socod uun KU jirto si aad reerihiinii u gaadho.
2- QAXII labaad we Xukuumad Ka yimmaaddaa Wuxuu ahaa dagaalkii Xabashida iyo Somalida we 1964kii . Waa dagaalkii afarta baynu jaho looga yaacay ha loo badnaado dhinaca bariga Hargeysa ee loo xulay Dooxa Maroodi jeex dhinaca Bari waa maalintay baxday BAKAYLA-QALAD ee bakaylayaasha dadku qasheen oo wax inagu cusub ahayd.
3-QAXII SEDDEXAAD Wuxuu ahaa ee Xukuumad kaga yimmaadda reer Somaliland kii 1988kii ee Daaquud kii Afweyne uu Somali Kala dilay halkay maanta kala joogtana Kala geeyey. Kumaankun KHASAARAHA ah baa Ka dhashay oo naf iyo maalba leh.
4- QAXII AFRAAD Wuxuu ahaa kii 1991kii
Oo ahaa markii NIFIRKA loo taagay keligii taliyihii Mohamed Siyaad Barre oo isna ahaa Qax Xukuumadi keentay.
5- Qaxii Shanaad isna Xagga Xukuumaddii ina Cigaalbaa keentay isna khasaare dad iyo maala baa KU hoobtay halkaa.
Runtii hadalkii Ka soo baxay Gabayaagii fiicnaa ee Tima cadde been Muu sheegin markii uu KU gabyey QORAXDII DHACDABA TEENU WAY KALA QAXAYSAA.
waxaa kaloo mucjisa ah Quran Ka Allah inoogu sheegay marka ummad jiritaan keeda laga hadlayo ama qaxeeda iyo burburkeeda ina Xumaanta keentaa Ka timaado Xagga Xukaamta oo hoos ugu soo degto xagga shacabka oonay weligeed Xumaanta ummad burburisaa Ka Iman xagga shacabka oo kor u socon xumaanta . Ayadaa Quranka ah shantaana QAX back waa u markhaati. shantaa reer Somaliland KU dhacayba xagga Xukaamta ayey Ka yimmaaddeen haddii Qax kale soo socdana sidaa Allah sheegay xagga Xukaamtuu Ka imanayaa .
Waa suaal da weynoo Madaxa daalinaysee QAX miyaanay Ka Tasha Karin reer Somaliland oo Dagaalka xagga Xukaamta Ka soo imanaya iska guarantee Karin si horuumar lawada leeyahay WADANKU ugu waaro????